Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Arthur Melo Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Onye nduzi“. Anyị Arthur Melo Child Akụkọ Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na eziokwu ndụ onwe onye. Na mgbakwunye, ihe ndị ọzọ a na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụzọ ya dị ebube. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ ndụ Arthur Melo nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Arthur Melo nke nwata - Mbido na ndụ ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo. A mụrụ Arthur na 12th nke August 1996 na nne ya, Lúcia de Melo, na nna, Aílton de Melo na Goiânia, Goiás, Brazil.
N'oge a, nne na nna Arthur na-elekọta ezinụlọ Roman Katọlik na ezinụlọ nwere nkasi obi na-etiti ezinụlọ. Ezubere ezinụlọ Arthur Melo site na papa ha n'obodo Goiânia nke nwere ọnụ ọgụgụ ala pere mpe na mba ahụ. Aílton de Melo abụwo nwoke na-arụsi ọrụ ike nke lekọtara ezinụlọ ya na ndị ọ hụrụ n'anya.
N'ịbụ onye na-etolite, enyi ya kasị mma abụwo onye mara mma-nwanne nwoke aha ya bụ Paul Henrique. Paul dị mkpụmkpụ ma afọ atọ toro karịa nwanne ya nwoke a ma ama.
Arthur Melo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ọrụ Nlekọta
Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị na-agba bọọlụ Brazil mere n'oge ha bụ nwata, Arthur sokwa n'echiche Brazil nke ịgbanye n'okporo ámá na-enweghị ihe ọ bụla na ebe a na-egwu egwu n'ime egwuregwu egwuregwu.
Uru nke inwe agbata obi dị jụụ abụghị naanị ya, mana nwanne ya nwoke na ndị enyi ya nwere ike igwu bọọlụ ha ebe niile. Arthur kwuru n'otu oge n'okwu ya;
“Ndị agbata obi m dị jụụ, ọ bụ ya mere mụ na ụmụnne m ji soro ndị enyi m na ndị enyi m egwu egwu, ụfọdụ n'ime ha ka m na-egwu egwu.
Echetara m na emere m ụkwụ ọtọ na nke ahụ, n'ọtụtụ oge, merụrụ m ikpere na mkpịsị ụkwụ ukwu. football bụ ihe na-amasịkarị m. ”
N'oge ụbọchị Arthur na-egwu bọl n'okporo ámá, ezigbo enyi ya na agha bụ nwanne ya nwoke bụ Paulo Henrique. N'oge ahụ, ọ dịghị ihe dịka ọdịdị otu na ụzọ. Ọ bụ maka usoro, aghụghọ, ịgba égbè, dribbling na spontaneity.
Arthur Melo Child Story - Otú Ọrụ Ya Si Malite:
Ná mmalite nke ndụ ya, Arthur na nwanne ya nwoke bụ Paulo kpebiri na ha ga-arara ndụ ntorobịa ha niile na football, n'adịghị ka ọrụ ọ bụla ọzọ. Nụ ka ụmụ ha na-ekwu na nke a ghọrọ ihe isi ike siri ike maka nne na nna ha ịgbawa n'ihi na bọọlụ Brazil na-asọmpi. Ndị nne na nna Arthur bụ Lúcia de Melo, na Aílton, na-ekwusi ike na agụmakwụkwọ ma ọ bụ na ha abụọ.
Arthur mere ka ndị mụrụ ya kwenye na ya nwere ike ilekwasị anya na ndị nkụzi ya ma ka na-enwe ezigbo egwuregwu n'emeghị ọsụsọ. N'ikpeazụ, nne na nna ya kwetara na ya na nwanne ya nwoke na-egwu bọl ma n'oge a, na-eme ya niile.
Ndebanye aha: Mgbe ọ dị afọ 5, nna Authur bụ Aílton kpọtara ya na nwanne ya nwoke bụ Paulo Henrique gaa Nilton Maravilha, anlọ akwụkwọ Futsal nke dị n'èzí iji debanye aha ha. Ha abụọ na-agakọ ebe niile ma na-egwuri egwu iche. Arthur keere 1996 ka Paul na-egwu maka 1993 set. N'okpuru bụ foto nke obere Arthur n'oge ụbọchị ya na Nilton Maravilha.
Mkparịta ụka nke Arthur na football futsal bụ ọrụ maka inyere ya aka inweta usoro egwuregwu football. Mgbe nwanne ya nwoke mechara kwụsị n'egwuregwu ahụ, Arthur gara n'ihu. N'ọnọdụ Arthur, ọpụpụ n'ọnụ ụzọ Futsal dị nwayọ. Ihe dribbles, ike na usoro ọhụụ egwuregwu ọ mụtara site na futsal tọrọ ntọala maka bọọlụ bọọlụ ọ na-eme ugbu a dị ka mpempe akwụkwọ.
Arthur Melo Biography - comingghọ Goias:
Arthur nọrọ afọ atọ na agụmakwụkwọ futsal nke Nilton Maravilha tupu ya ekpebie ịgbanwe site na fustal gaa bọọlụ agụmakwụkwọ nkịtị. Ọ nwere ikpe na-aga nke ọma na Goias, ụlọ ịgba egwu football kachasị mma na obodo Brazil.
N'ikwu okwu banyere isonyere Goias, Arthur kwuru otu oge;
"Ọ bụ papa m gbara m ume ịbịanye aka n'ihi na maka m ihe niile na-egwuri egwu,"
Mgbe a na-eyi uwe elu Goiá maka oge mbụ, ọ bịara mara na ọ ga-arara ndụ ntorobịa ya nile na egwuregwu ahụ.
Gba egwu n'otu oge ghọrọ àgwà maka Arthur n'ihi na ọ bụ onye kachasị egwu na ọgbọ ya. Nke a mere ka onye nchịkwa ya kwado ya ka ọ gwuo ogo ogo.
N'ihi àgwà ya, Arthur na-egwu egwu maka afọ abụọ na Goias. Ọ hụrụ ndị iro ka ukwuu, mmegide ka ukwuu ma ghọọ ezigbo nká. N'okpuru ebe a bụ foto nke nwa Arthur na-eto eto mgbe ọ bụ ọkpụkpọ obere nwa ahụ.
Ike Arthur imeghari na igwu egwu nke oma ya na ndi nne ya, nna ya, ndi ikwu ya na ndi enyi ya nwere obi uto ile ya anya. Ná mmalite nke ọrụ ya, ọ malitere mmeri aha.
Arthur Melo Bio - Inweta Egwu na isingrị:
Agụụ Arthur ịnọgide na-emeri nọgidere na-aga n'ihu mgbe ọ na-eto eto n'okorobịa. Agụụ a mere ka ọ mata ụdị onye ọ bụ nke dugara n'ọnọdụ pụrụ iche. N'elu ochicho klọb ya, Arthur ga-anakpo ọkpụkpọ òkù sitere na klọb Fustal ndị ga-akwụ ya ụgwọ maka egwuregwu asọmpi.
Ọbụna mgbe Arthur na-eme egwuregwu football ya na 11 dị na Goia, ọ nọgidere na-anakwere onyinye nzuzo ndị a nke na-emetụta. Dị ka nna ya si kwuo,
"Otu ndị ọzọ a rịọrọ ya ka ọ ghara ịkọrọ ndị Goias ihe ọ bụla, Arthur adịworị afọ iri na abụọ ma bụrụkwa onye gọọmentị,"
Izo na nzuzo ndị ọzọ na-eweta ọtụtụ ahụmahụ NA ike ọgwụgwụ nye kpakpando ahụ. Arthur bịara dị oke mkpa maka ndị isi otu ka ọ biliri ịbụ onye isi nke ọgbọ ya. Ọ dị ezigbo mkpa na ọ gaghị etinye ya n'ihe ize ndụ. Arthur gosipụtara n'otu oge na-aga ịme egwuregwu na aka ekpe aka ya (Lee foto dị n'okpuru).
Igwefoto egwuregwu nke egwuregwu ahụ kwụsịrị na ihe egwuregwu malitere site na igwefoto niile na-elekwasị anya na onyeisi ndị ntorobịa nwere aka gbajiri agbaji. Arthur ghọrọ onye na-achọsi ike ma na-eme egwuregwu midfield na egwuregwu. Onye toro ọkpụ abụọ toro onye na-egwu bọọlụ ahụ mma maka inwe nghọta ebumpụta ụwa nke oge na oghere na bọọlụ n'agbanyeghị na ọ gbajiri aka.
Mgbe a na-eme egwuregwu ahụ, Arthur malitere ịnata akwụkwọ ịkpọ òkù. N'oge niile ọ bụ nwata, ọ bụ Arthur Melo, onye isi ụgbọ mmiri, amaara ya dị ka onye na-eme ka ọhụụ mara ya.
A na-akwanyere ya ùgwù dịka a hụrụ ya dị ka onye na-eto eto na-eto eto n'obodo Goiânia.
Arthur Melo Bio -Rise to aha Europe:
Na 2010 mgbe ọ dị afọ 14, Arthur kpebiri na ọ bụ oge kwesịrị ekwesị ịhapụ obodo ya. Enye ama enen̄ede ọtọn̄ọ ndinam enye ọyọhọ idem onyụn̄ ọbọhọ ke enye ọfiọk nte owo emi ọfọnde. Gremio hụrụ ya mgbe ọ na-eme ihe ngosi mgbe ọ na-eto eto na obodo ya.
Arthur kpebiri ịhapụ ụlọ ọgbakọ nke obodo ya maka Grêmio, nke atọ mara mma na nke kachasị baa uru (egwuregwu $ 295.5) na mpaghara South America niile.
Na Gremio, Arthur biliri karịa ndị ntorobịa niile wee bulie onwe ya n'ọkwá klọb na 2015. Nke a bụkwa oge oge diamond siri ike gbanwere ghọọ kpakpando mba site n'aka onye nkuzi ya n'oge ahụ, Renato Gaucho.
Arthur ghọrọ ndị otu egwuregwu otu egwuregwu na-eme nke ọma. Na Gremio, o mepụtara ndekọ nke ịme 40 gafere, ha niile nwere nnukwu ọganiihu 100%. Nke a mere n'oge mbụ Copa Libertadores.
Nke a na-adọta ọdụm European dịka Chelsea, Barcelona na Athletico Madrid. Nke a bụ oge oge ụlọ klọb Europe malitere iji ụdị egwu egwu ya tụnyere Andres Iniesta na Thiago. Onye na-eme egwuregwu na-edu otu egwuregwu dugara ndị otu ya ka ha merie Copa eme Brasil na 2016, na Copa Libertadores na 2017 na Recopa Sudamericana na 2018.
Dị ka onye ọkpụkpọ kachasị n'azụ mmeri ọ bụla, a kpọrọ Arthur “Nchịkọta Mbụ”Ndị bụ ndị maara akụkọ ndụ ya gara aga banyere ibuli trophies. Na Copa Libertadores nke ikpeazụ, Arthur ruru 94.8% gafere nke ọma. Naanị Mma enwetawo nnukwu mma.
Ka oge na-aga, ụdị egwuregwu na ịdọ aka ná ntị nke Arthur ghọrọ akara aka ya. Nke a bụ oge ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ si Europe kwenyesiri ike na ịkwaga maka nwata ahụ. Ewezuga Europe, ọbụna klọb ndị South America nyere ịchụso kpakpando bọlbụ. Nna Arthur, Ailton, chetara otu oge;
"Sao Paulo kpọrọ m, ha chọrọ ịbanye Arthur, "ọ na-echeta," mana Gremio ekweghị ka ọ laa. ”
Maka Renato onye nchịkwa ya, ọ bụghị ihe ijuanya na ire ere Arthur ghọrọ ihe a tụlere na ọkwa ụlọ. N'ịmara na klọb ga-amalite ịbanye, ndị otu Gremio nọ na ha niile kpebiri ịba ụba nke ntọhapụ nke akwa ọla edo ha.
Arthur Melo Facts -Ndụ FC Barcelona Nkata:
Enwetara imi ole na ole na nkwonkwo ha na Brazil mgbe a hụrụ foto nke onye Grêmio Superstar bụ Arthur na nnukwu anomaly. Ejiri Arthur na foto yi uwe elu Barcelona nke megidere ụkpụrụ klọb ya.
Clublọ ọrụ ya Gremio enwetaghị nleta ọ bụla mana gbakwasịrị ụkwụ site na FC Barcelona scout Andre Cury na Ronaldinho si nwanne Roberto Assis. Ndị otu a na-agagharị gakwuuru ezinụlọ Arthur ka ha kpọpụta ha maka nri abalị.
Ị maara?!! Diego Assis, nwa Roberto de Assis na RonaldinhoNwa nwanne nwoke pụtakwara na foto ahụ maka nna ya nke nyere nwa ya nwoke ka ọ nọchite anya ya.
Mgbe ha hụrụ foto ahụ, ndị agbụrụ kwubiri na ọ bụ atụmatụ doro anya site FC Barcelona na Anọ ezinụlọ iji mee ka nwatakịrị ahụ hapụ ụlọ ya. Peharbs ọ bụghị ihe ọhụrụ nye ụfọdụ Fans ndị maara Arthur ka a ga-eji na-anata mkparịta ụka na-enye maka igwu egwu maka ndị ọzọ na-azụ azụ.
Mmekọrịta Gremio: Foto ahụ were iwe megide klọb ya Grêmio bụ onye kọọrọ FIFA ihe merenụ na-ebo Barcelona ebubo na ọ na-eme ihe. Nestor Hein onye ndụmọdụ ọka iwu Grêmio na akụkọ kwuru ihe ndị a;
“Nwa okorobịa a bụ Arthur bụ onye na-egwu anyị. Banyere ụzọ niile e si mee ya, ọ gaghị ata ụta. Agwara m na Barça zipụrụ ndị na-agụ ha ka ha gaa Europe were Arthur na ezinụlọ ya rie nri ehihie.
Grêmio enweghị ike igbochi ya ime nke a mana Barça na - ewetara Grêmio nsogbu site na ịnwa imetụta nwatakịrị ahụ ”
Mmeri N'ihi FC Barcelona: N'ikpeazụ, Gamio kwadoro nrụgide ma ọlaọcha ikpeazụ ha weere FC Barcelona na-agba ọsọ dị ka e mesiri ya obi ike dochie Andreas Iniesta.
Maka Arthur, ọ bụ nrọ nke mezuru dịka ọ na-achọ mgbe nile ịghọ onye ọkpụkpọ Barcelona site na nwata. Arthur dị mpako ịbanye na club 34 nke Brazil.
Arthur Melo Biography - Ndụ mmekọrịta:
Mara mmekọrịta mmekọrịta nke Arthur ga - enyere gị aka ịmebe nkọwa zuru ezu banyere ya. Site na mmalite nke ọrụ agadi ya na Gremio, Arthur nọ na enyi ya nwanyị mara mma nke aha ya bụ Keila Garcia.
A maara Kelia nke ọma dịka ihe nlereanya na Brazil. Hụ ka enyi ya nwoke na-ebuga ya FC Barcelona ga-emerịrị ya ịkwadebe, mana ọ na-egbu oge iji zute ya na Spain. A na-enwe ekele maka Keila Garcia maka ịma mma ya mara mma maka foto ndị mara mma ọ na-ebugo na akaụntụ mgbasa ozi ya. Anyị nwere foto atọ ya maka ọhụ ihe nkiri gị.
Na-ekpe ikpe site na ọdịdị ihu ya, enyi nwanyị Arthur Melo Keila Garcia kwesịrị ịbụ 1 ma ọ bụ 2 afọ karịa nwoke ya.
Obi abụọ adịghị ya, Keila bụ ihe mara mma nke na-eweta klas na nchịkọta nke FC Barcelona.
Arthur Melo Ndụ Nke Onwe:
Malite, Arthur Melo mara mma. Na ikpe site na ụbọchị ya na Goias, Arthur Melo abụwo onye ndu sitere n'ọmụmụ mgbe niile. Ọ bụ onye nwere ike imezu ihe ọ bụla n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ya ọ na-etinye onwe ya. Ọ bụ onye okike, onye nwere ọrụ, na-emesapụ aka ma nwee obi ọkụ.
N'ileghachi anya azụ n'akụkọ ọrụ ya, Arthur bụ onye na-achọ ka a ghara ileghara ya anya ma nwee nsogbu na-eche ihu na ihe siri ike. More otú, ọ na-achọghị ka a na-emeso ya dị ka eze ekele ya nke na mmewere nke Fire (a Leo).
Ndị ọkà mmụta: Onye ọ bụla maara na ndị ama ama ama ama maka ihe ha na-eme na pitch. N'ebe ihe ọ na-eme na pitch, Onye edemede ahụ na-ewere ọrụ nke ndị nkụzi n'èzí pitch. Ọ na-ewepụta oge iji mụọ ihe n'ịntanetị.
Sense Dressing: A maara Arthur ka ọ bụrụ onye na-ahụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. Nke a ka ọ na-eyi egwuregwu ya.
Ezigbo Eziokwu nke Arthur Melo: Nne Arthur Melo Lucia na-agba ọsọ nke onwe Twitter akaụntụ raara onwe ya nye iji kwado nwa ya nwoke.
Arthur anaghị echefu ekele maka nne ya ọ hụrụ n'anya n'ihi ịhụnanya na nkuzi ya site na nwata.
Ezinụlọ Arthur nwere mmekọrịta chiri anya na onye otu ya na Brazil Neymar.
Ezigbo ezinụlọ: Ezigbo ezinụlọ nke Arthur bụ ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya na-agụnye ọtụtụ ndị otu egwuregwu FC FC Coutinho na Rafinha. Site n'oge ruo n'oge, ha niile na-apụ iji nweta nri Brazil (farofa, picana, churrasco, agwa, wdg.)
Arthur nwere ọtụtụ ndị enyi na-ekele ya na ọ na-emesapụ aka ma na-eguzosi ike n'ihe. O nwere ike ijikọta ìgwè dị iche iche nke ndị mmadụ.
Arthur Melo Eziokwu Eziokwu:
Nsogbu Idol: Arthur Melo hụrụ ka e jiri ya tụnyere arụsị ya Andreas Iniesta onye hapụrụ Barca na njedebe oge 2017 / 2018. Otú ọ dị, nke a anaghị eme. Kama nke ahụ, a na-eji ya tụnyere Xavi oge enweghị nọmba.
FC Barcelona tinyere ndị na-esonụ na Summer Arthur Melo mụrụ. Ha gụnyere; Laurent Blanc, Fernando Couto, Giovanni, Luis Enrique, Juan Pizzi, Ronaldo, Hristo Stoichkov na Vítor Baía.
Ọrịa Ya Dị Mkpa: Arthur nwere mmerụ ọnwa anọ n'ihi mmerụ ahụ metụtara nkwonkwo ụkwụ aka ekpe ya. Nke a mere na njedebe nke Libertadores na 2017.
Arthur Melo Biography Video Nchịkọta:
Biko chọta n'okpuru, nchịkọta vidio YouTube maka profaịlụ a. Jiri nlezianya gaa na Gbanyụọ anyị Youtube ọwa maka vidiyo ndị ọzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Arthur Melo Childhoodmụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.